FAMPIASANA NTENDED Ny StrongStep® FOB Rapid Test Strip (Feces) dia immunoassay haingana amin'ny fahitana ny hemoglobin'olombelona amin'ny karazan-tànan'olombelona. Ity kit ity dia natao hampiasaina ho fanampiana amin'ny fitiliana ny aretin'ny gastrointestinal (gi) ambany. FANAMBARANA Ny homamiadan'ny kolontsaina dia iray amin'ireo homamiadana hita matetika ary antony lehibe indrindra mahatonga ny fahafatesan'ny homamiadana any Etazonia. Ny fitiliana ny homamiadan'ny lokony dia mety hampitombo ny fitiliana ny homamiadana amin'ny ...
Vahaolana fandokoana fluoresensa
The FungusClearTMNy vahaolana fandokoana fluorescence amin'ny fungal dia ampiasaina amin'ny famaritana haingana ireo aretina hafa amin'ny holatra amin'ny karazan'olona vaovao na fenom-pitsaboana, paraffin na glycol methacrylate. Ny santionany mahazatra dia misy ny fikikisana, ny hoho ary ny volon'ny dermatophytosis toy ny tinea cruris, tinea manus ary pedis, tinea unguium, tinea capitis, tinea versicolor. Ampidiro ao koa ny sputum, bronchoalveolar lavage (BAL), ny fanasan-damba, ary ny biopsy avy amin'ireo mararin'ny aretina azo avy amin'ny holatra.
FAMPIASAANA INDRINDRA Ny StrongStep® Procalcitonin Test dia fitsapana haingana-chromatographique ho an'ny famaritana semi-haben'ny Procalcitonin amin'ny serum na plasma an'ny olombelona. Izy io dia ampiasaina amin'ny famaritana sy fanaraha-maso ny fitsaboana ny aretina mahery sy ny bakteria ary ny sepsis. FAMPIDIRANA Procalcitonin (PCT) dia proteinina kely izay misy residu asidra amine 116 miaraka amin'ny lanjan'ny molekiola eo amin'ny 13 kDa izay nofaritan'i Moullec et al voalohany. tamin'ny 1984. Ny PCT dia novokarina tamin'ny C-cel ...
Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana, H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus, Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket, Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19,